परिवर्तनको शक्ति डर, प्रोग्रामिंग र गलत भ्रम बहाउनबाट सुरु हुन्छ र एक साँचो क्रान्तिमा परिणत हुन्छ: मार्टिन भ्रिजल्याण्ड
हालका महिनाहरूमा, आधा संसार अदृश्य कोरोनाभाइरस दुश्मनको गहिरो डरमा गोली मारिएको छ। बहुमतलाई थाहा छैन कि मिडिया र राजनीति, पावर पिरामिड (जुन प्राचीन कालदेखि खडा भइरहेको छ) सँगसँगै, हाम्रो संसारको धारणा कसरी निर्धारण गर्दछ। हामीले देख्ने र विश्वास गर्ने प्रायः सबै चीज सामूहिक ट्रुमेन्शोको रूपमा रंगीएको छ, जुनमा पिरामिडको माथिल्लो भाग धारणा निर्धारण गर्दछ।
जनसंख्याको महत्वपूर्ण हिस्सा उही उर्जा शक्ति पिरामिडबाट खुवाइन्छ, तर बुर्जुवा वर्गमा छुट्टाछुट्टै लुकेको छ।
यदि तपाईं माकुरोको वेबमा सत्य खोज्नुहुन्छ भने, थ्रेड थरथर कम्पन हुन्छ र माकुरोले थाहा पाउँदछ कि तपाईं यसको वेबमा हुनुहुन्छ। यदि तपाई कडा कम्पन गर्नुहुन्छ भने, माकुरो तपाईलाई समाहित गर्न चलाउँदछ। हामी विश्वव्यापी वेब (www) मा छौं र हामीले यो याद राख्नुपर्दछ कि यसमा उडान रोक्नका लागि मात्र एक मात्र मार्ग लुकेको छ। तर एक पटक हामी वेबमा छौं, यो महत्वपूर्ण हुन्छ कि encapsulated बाट बच्न। समयमा आफ्ना पखेटाहरूको प्रयोग गरेर र आफैंलाई फाड्नु नै एक मात्र समाधान हो।
त्यो सबै सुन्दर चित्र हो, तर अभ्यास अनौंठो छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले यो पत्ता लगायौं कि हामीले हाम्रो जीवनको एक प्रोग्रामिंग वेबमा रहेको कुराबाट शुरू गर्नु पर्छ; झूटा वास्तविकता जसले हाम्रो चेतनालाई घटाएको छ र हामीलाई निर्भरता मोडमा राख्छ।
यदि हामी जालहारीमा माकुरो समात्न सक्छौ कि भनेर हेर्न वेब खोजी गरिरह्यौं भने, हामी बिर्स्यौं कि प्रत्येक थ्रेड माकुराको माध्यमले बुनेको छ।
मेरो नोभेम्बर २०१ book किताब कसरी यो Trumanshow सामूहिक रूपमा कायम छ एक सारांश प्रदान गर्दछ। पावरको क्लकवर्कमा सबै रडारहरूसँग आफ्नै रडार उप-क्षेत्र हुन्छ। तिनीहरू गर्न सक्दैनन् वा ठूला चित्रहरू हेर्न चाहँदैनन्। कहिलेकाँही त्यो 'हेर्न चाहन्न', किनभने यो आर्थिक क्षतिपूर्ति वा क्यारियरको साथ आउँदछ। धेरै मानिसहरुको आँखा बन्द गर्न को लागी पैसा र प्रतिष्ठा को कारण छ (यदि उनिहरु पहिले नै ठूलो चित्र को लागी खोज्छ भने)। सामान्यतया यो 'हेर्न असमर्थ' हुन्छ किनकि सबैले यस्तै प्रकारको प्रोग्रामिंग पार गरेका छन्।
हामी सिर्टोलोजीमा 'ज्ञान शक्ति हो' को रूपमा विश्वास गर्न आएका छौं, हामीले विश्वास गरेका छौं कि यदि हामी पाठ अनुसरण गर्छौं र लगनशील हुन्छौं भने हामी अझ बढी प्राप्त गर्छौं, तर अन्तमा सबैले माकुराको वेबको थ्रेडहरूमा मात्र कम्पन हुन्छ र हामी वेबलाई सहयोग गर्छौं। बढ्नु।
वेबबाट बाहिर उड्नको लागि यसले विशाल चेतना परिवर्तन गर्दछ। र त्यो तपाइँको मूल चेतना को एक जागृति संग शुरू हुन्छ। "वेबमा सत्य खोजी गर्दै" "चेतना" शब्दलाई भ्रममा नपार्नुहोस्, किनकि तपाईं त्यस वेबमा ध्यान दिन जारी राख्नुहुनेछ। चेतनाको लागि सबै भन्दा राम्रो पर्यायवाचक शब्द शायद आत्मा हो।
मेरो पुस्तकमा मँ भन्छु कि हाम्रो चेतना (हाम्रो 'आत्मा') ले यो भाइरस वास्तविकता बुझ्दछ। हाम्रो चेतना यसको सह-निर्माता हो मूल ब्रह्माण्ड, जसमा प्रत्येक आत्मालाई एक स्टेम सेलसँग तुलना गर्न सकिन्छ जसले प्रत्येक सम्भावित कोष गठनको आधारभूत जानकारी समावेश गर्दछ, तर एउटा स्टेम सेलहरू सक्रिय गर्दछ एउटा पाखुरा वा खुट्टा र अर्को छालाको कोषमा खोलिन्छ। तपाईं र म, त्यसैले बोल्न सक्दछौं, मूल ब्रह्माण्डका सह-निर्माताहरू।
त्यो पुस्तकमा मैले अहिलेको अनुभव गरिरहेको महामारीको पनि पूर्वानुमान लिएँ। मैले त्यो पूर्वानुमान गर्न सक्थें किनकि मैले पत्ता लगाए कि हालको (झूट) वास्तविकता ठीक भाइरसको जस्तो व्यवहार गर्दछ। भाइरस पावर सिस्टमको मुख्य व्यवसाय जस्तै यो हो। यस वास्तविकतालाई यसको पावर पिरामिडबाट चलाउने कार्यक्रम मूल जीवित कोशिकाहरूबाट स्टेम सेल जानकारीको आगत बिना केही पनि होईन। भाइरस होस्ट बिना बाँच्न सक्दैन। यसलाई मूल कोशिकाको मूल स्टेम सेल जानकारी आवश्यक छ (मूल 'आत्मा')।
तसर्थ, वेबबाट केवल एक मात्र तरीका छ र त्यो 'डिकुलिंग' र भाइरस प्रणालीलाई उर्जा दिन रोकिन्छ। यो खोजीबाट सुरू हुन्छ कि तपाईं भाइरस प्रणालीमा कठपुतलीहरू भन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ। त्यो खोज पछि तपाईले विश्वास फेरि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ; विश्वास छ कि तपाईको आत्माले स्टेम सेल जानकारी प्रतिरोध निर्माण गर्न र भाइरस लाई समाप्त गर्नको लागि बोक्छ।
यो तपाईको सामर्थ्यमा विश्वासको साटो सुरु हुन्छ प्रोग्रामिंगमा विश्वासको सट्टा तपाईलाई बाल्यावस्थादेखि नै गर्न बाध्य पारिएको छ (व्यक्तिहरू जो आफैं पनि प्रोग्राम गरिएका छन्)। यो सानो सुरु हुन्छ र प्रभाव सुरुमै मुश्किल देखिने देखिन्छ। त्यसोभए अचानक तपाईका वरपर धेरै व्यक्तिहरू उठ्छन् र बल क्षेत्र सक्रिय हुन्छ जुन पहिले कहिल्यै भएको थिएन।
मूल ब्रह्माण्डका सिर्जनाकर्ताहरू जागृत हुन्छन् र उनीहरूको सृजनात्मक शक्ति सक्रिय गर्दछन् र यद्यपि पहिले सानो देखिन्छ र अदृश्य देखिन्छ - जागरूकता बढ्दै जान्छ र भाइरसले आफ्नो शक्ति गुमाउँछ अन्तमा कमजोर बनाउन। त्यसकारण, आज सुरू गर्नुहोस् र तपाईंको वास्तविक क्षमता सक्रिय गर्नुहोस्। प्रणालीको बिरूद्ध एन्टि-पदार्थहरू बनाउनुहोस् ताकि हामी प्रणालीलाई पुन: प्रोग्राम गर्न सक्छौं। हामी यसलाई फरक तरिकाले गर्न जाँदैछौं; हामी यसलाई पुनःप्रोग्राम गर्नेछौं। तपाईं र म हुँ भन्ने प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय गर्नुहोस्!
ट्याग: जागरूकता, कोरोनाभाइरस, विशेष, प्रतिरक्षा प्रणाली, पावर पिरामिड, जागृत, आत्मा, ब्रह्माण्ड, भाइरस, भाइरस प्रणाली, जग्गा, वेब, आत्मा
26 मई 2020 मा 13: 08
त्यसैले सन्देश यो हो: आफ्नो खुट्टामा लात नलगाउनुहोस्, तर पत्ता लगाउनुहोस् कि तपाईं पखेटा हुनुहुन्छ र वेबबाट उडान।
27 मई 2020 मा 09: 22
दिन १ देखि मैले यो सुन्न सक्दछु। मैले केहि पनि वास्ता गरिन।
एक पटक मेरो हातहरू धोईएको छैन, लिफ्टको सबै बटनहरू छोइए, सबै ब्यानरहरू आदि।
परिणाम ... के अनुमान लगाउनुहोस्, मेरो बारेमा सबै बेहोश मनको थियो र मलाई हेरिरहेको थियो कि म एकदम फोहोर, वा नराम्रो थियो।
साथै एक सुन्दर अनुभव।
डेका बजारमा एक समान विचारधारा भएको मानिस थियो, हामीले तुरुन्तै महसुस गर्यौं कि हाम्रो बन्धन छ, हामी एकअर्कालाई चेकआउटमा कमसेकम 30० सेकेन्ड अँगालो हालेका! यदि बाइसेन्डरसँग हतियारहरू भए हामीहरू थियौं
ध्वस्त भयो, वास्तवमै ती सबै लाशहरू। हामीले मुस्कानका साथ बिदाइ्यौं र मानिसहरूलाई उनीहरूको पागलपनमा छोडिदिए। Sodemieter तपाईंको बिल्ली भाइरस को एक अन्त हाम्रो उपस्थिति थियो।
त्यो स्पष्ट थियो !!
त्यसोभए, के यो मार्टिनलाई अनुमति थियो?
27 मई 2020 मा 13: 36
तपाईको हृदयस्पर्शी टुक्रा। कक्षा
29 मई 2020 मा 23: 33
मिडिया (डी क्रान्ट) भन्छन कि एक धूर्त पार्टी आयोजित थियो
यद्यपि पार्टी एक कपटी होइन, मूलधारको भाषा हो
झन् झन् झन् कपटपूर्ण हुँदै गइरहेको छ, जुन तर्फ यी भनिन्छ
पत्रकारहरु? जसले यी कपटी पाठहरु प्रदर्शन गर्दछ।
Sneakiness मापन हो र वरिपरिको अर्को तरिका होईन, यसलाई धेरै स्पष्ट हुन दिनुहोस्!
30 मई 2020 मा 22: 37
एक प्रदर्शनको बेला अमेरिका जर्ज फ्लोडको बिपरित भयो
« आईफोनले भर्खरको आई-ओएस १.19..13.5 अपडेटमा कोविड १-अनुप्रयोग लुकाउँछ
कोरोना क्रिसिस कोविड -१ 19 २०० MS एमएस ब्लास्टर भाइरस बिल गेट्स अभिनीत याद ताजा गरीरहेको छ »
कुल भ्रमण: 4.169.824